डाक्टरीमा सकियो कागजी युग « Aarthik Sanjal डाक्टरीमा सकियो कागजी युग – Aarthik Sanjal
११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार ०७:५०
‘पहिलेको कागजी परीक्षामा उत्तर भर्दा धेरै त्रुटि हुने सम्भावना हुन्थ्यो। एकपटक लगाएको उत्तर चिह्न सच्याउन मिल्दैनथ्यो। अब उत्तरमा पुनः फेरबदल गर्न मिल्छ। दुई ठाउँमा उत्तर लेख्न मिल्दैन।
दुई ठाउँमा उत्तर लेख्न खोजे कम्प्युटरले मान्दैन’, काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. कृष्णप्रसाद अधिकारीले भने, ‘फोटो, नाम र कतिवटा उत्तर भयो। कतिवटा बाँकी छन्। बुझाउनअघि नै कम्प्युटरले सचेत गराउँछ। तीन महिनाअघिको विशेषज्ञ परीक्षादेखि पुरानो शैली फेरियो।’
परीक्षा हलमा प्रवेश गर्नुपूर्व बायोमेट्रिक हाजिरी गर्नुपर्छ। परीक्षार्थीले तोकिएको स्थानमा बसी नाम र पासवर्ड कम्प्युटरमा प्रविष्टि गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र निर्देशिकासहित प्रश्नपत्र देखिनेछन्।
कम्प्युटर मनिटरमा परीक्षार्थीको फोटो, रोल नम्बर, परीक्षाको समय, उत्तर दिएको संख्या र उत्तर बाँकी संख्या निरन्तर देखिनेछ।
स्नातक तहको परीक्षामा हरेक प्रश्नका चारवटा वैकल्पिक उत्तर हुन्छन्। त्यसमध्ये उपयुक्त एक उत्तरमा चिह्न लगाउनुपर्छ। ‘कुनै एक उत्तरमा चिह्न लगाएको शंका लागे उत्तर परिवर्तन गर्न पाइन्छ’, रजिस्ट्रार डा. अधिकारीले भने, ‘एक पटक लेखिसकेको उत्तरलाई पुनः संशोधन गर्न सकिन्छ। नमिलेको उत्तरको नकारात्मक अंक हुनेछैन।’
‘कुन प्रश्नपत्र परीक्षार्थीले कति खेर चिह्न लगायो र कुन प्रश्नमा कति नम्बर आएको छ भन्ने तत्कालै हेर्न सकिन्छ’, डा। अधिकारीले भने । सबै परीक्षा सकिएपछि मात्र नतिजा प्रकाशन गरिने काउन्सिलले जनाएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट
१२ फाल्गुन २०७७, बुधबार ०७:२८
पुनर्स्थापनापछि कसरी बढ्छ अबको प्रक्रिया ?
१२ फाल्गुन २०७७, बुधबार ०६:५०